Muddo dheer, warshadaha softiweerku waxay u kala qaybsanaayeen barnaamijka 'Software' iyo 'Adeeg Bixiyaha Adeegsiga'. Barnaamijka wuxuu ku raraa oo ku shaqeeyaa gudaha kombuyutarkaaga / MAC. ASP waa softiweer ku shaqeeya serverka waxaadna dhexgaleysaa biraawsar. Faa'iidada ASP waxay tahay inay soo rogi karaan sixitaanka iyo astaamaha cusub adigoon u baahnayn inaad wax ku rakibto gudaha. Khasaaruhu wuxuu ahaa in barnaamijka kumbuyuutarka ku saleysan uu si aad ah u xaddidan yahay sababtoo ah barnaamijka macmiilka-dhinaca iyo xaddidaadaha biraawsarka.
Qaar ka mid ah tusaalooyinka waaweyn: Fiiri jiidaha iyo hoos u dhigista shaqada tan site.
Ma jeceshahay MS Word? Waxaa jira tifaftireyaal aan caadi aheyn oo kujira shabakada. Waa tan mid.
Ma sii dheeraan doonto ka hor intaan Adeeg bixiyayaasha Codsigu bilaabin inay la wareegaan Waxaan qiyaasi karaa maalinta aad kireyneyso Microsoft Office $ 9.95 bishii halkii aan ka bixin lahaa dhowr boqol liisankasta.
Waa maxay Your Bailiwick?
16, 2007 at 2: 20 AM
@Douglas: "PHP iyo VBScript ayaa tusaale u ah luqadaha dhinaca Server-ka."
Taasi dhab ahaan maahan farsamo ahaan run ku saabsan VBScript. Maxaa run ka run noqon lahaa in la yiraahdo “VBScript waa tusaale luuqad qoraal ah oo inta badan loo adeegsaday dhanka Server-ka oo ah luqadda koowaad ee ASP-ga Microsoft inkasta oo loo adeegsan karo luqadda qoraalka dhinaca macmiilka ee Microsoft Internet Explorer."
Haa, waa mid af badan oo aan kalmado hoos udhigi lahaa, laakiin marka la fiiriyo macnaha guud, maxaa dadaalka loogu baxayaa? 🙂